Izindaba - Isikhathi Sokubukisa Esiku-inthanethi Siyeza — Isambatho Sourcing Paris / Sourcing At Magic Online
Igciwane le-corona liguqula imibukiso eminingi iye kwinsizakalo eku-inthanethi. Esikubamba iqhaza manje ngoSepthemba 2020 yilezi ezi-2 ezilandelayo: I-Apparel Sourcing Paris (Septhemba 1,2020-February 28, 2020) kanye ne-SOURCING e-MAGIC Online (Septhemba 15-Disemba 15, 2020)
I-Apparel Sourcing Paris ne-Shawls & Scarves yimibukiso yamazwe omhlaba ngemfashini ehlelwe nguMesse Frankfurt France (MFF). Umbukiso uzobe uhlanganiswe ne-Avantex, Leatherworld, Texworld neTexworld Denim Paris, eyenzeka kabili ngonyaka enkundleni yezemidlalo iLe Bourget futhi ihehe izinkulungwane zezivakashi ezingochwepheshe ezivela kuwo wonke umhlaba.
UKUTHOLA i-MAGIC Online kunikeza ochwepheshe ukuthola ukufinyelela kumphakathi wamazwe omhlaba wabakhiqizi bomhlaba wonke, abahlinzeki, nabahlinzeki bezinsizakalo, ngokwamanani Ababekhona bazokwazi ukudlulisa amehlo emakethe yedijithali ngokusebenzisa izinketho ezahlukahlukene zokuhlunga usesho kungxenyekazi esetshenziswa kalula eyenzelwe ukucabanga ngemfashini kanye nochwepheshe bezinketho zokunikezela.
Lesi isikhathi sethu sesibili sombukiso we-inthanethi. Sakha igumbi lethu lokubonisa online ngokusebenza ngokubambisana nethimba lethu eliku-inthanethi. Imibukiso eminingi engaxhunyiwe ku-inthanethi ikhanseliwe kulo nyaka. Umbukiso oku-inthanethi njengendlela entsha yebhizinisi wamukeleka kakhulu kunakuqala. Kubonakala kuzoba yindlela ejwayelekile yebhizinisi lamanye amazwe ngokuzayo. Le mibukiso emi-2 eku-inthanethi ingahlala izinyanga eziyi-3-4. Sikulungele futhi Siyakwamukela nophenyo!